Tahaka ny fitondran’ny olona ny zanany
“Jehovah Andriamanitrao [nitondra] anao tahaka ny fitondran’ny olona ny zanany, dia teny amin’ny lalana rehetra izay nalehanareo mandra-pahatonganareo teto amin’ity tany ity.” Deoteronomia 1:31
“Ary izy nandefitra tamin’ny nataony tany an’efitra tokony ho efapolo taona.” Asan’ny Apostoly 13:18
Androny hariva ny fianakavian’I Faniry dia nasain’ny namany hisakafo. Nihalava ny resaka, reraky ny nilalao ilay zaza ka nitakoko tery an-jorontrano, niandry ny hahavitan’ny olon-dehibe ny resany.
Rehefa nanapa-kevitra ny hiainga ireo ray aman-dreny dia efa natory be izy. Noraisin-drainy moramora izy ka notrotroiny. Niondana teo an-tsoroky ny rainy ny lohan’ilay zaza, matory tsy manana ahiahy kely akory. Nanahy ilay reniny sao mangatsiaka ilay zazalahy kaly, ka norakofany tamin’ny akanjomafanany. Napetraky ny rainy moramora tao anaty fiara izy ary notandremany I Faniry. Mbola renoka ihany ilay zaza. Tsy fantany akory ny fikonokononana rehetra natao taminy.
Izany fisehon-javatra izany dia nitranga sy mbola hitranga imbetsaka. Ray iza no tsy tohina, nitrotro ny zanany renoky ny torimaso, miankina eny aminy am-pahatokiana tanteraka? Reny iza no tsy nandrakotra am-pitiavana ny zanany kely matory?
Tsy hiraika ve isika raha manambara amintsika Andriamanitra fa “tahaka ny fitondran’ny olona ny zanany” no nikarakarany ny olony fahiny? Izayny ve tsy maneho amintsika ny fitiavany tsy tsapantsika akory, matetika. Aoka ary isika hanaiky am-pahatokiana tanteraka hokarakarain’ny Raintsika.